အသည်းကင်ဆာဖြစ်မှာစိုးတယ် . . . – Healthy Life Journal
Posted on ဇနျနဝါရီ 6, 2019
မေး. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အသည်းကင်ဆာဖြစ်တယ်ကြားလို့ ကြောက်နေပါတယ်ဆရာ။ မဖြစ်အောင် ဘာတွေဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ။
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. အသည်းကင်ဆာက အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိပြီး ကုသမှု မခံယူဘဲနေတာနဲ့ အရက် အလွန်အကျွံသောက်တာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးနဲ့ စီပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။ ဘီပိုးမရှိရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ၊ ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိရင် ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါဘီပိုးရှိသူတွေက အရက်သောက်ရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး မရှိဘဲ အသည်းကင်ဆာဖြစ်နှုန်းမြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဖြစ်ရာကနေ ကုသမှုမခံယူတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
Related Items:Cancer, liver cancer
ကိုလက်စထရောများခြင်းနှင့် ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း ကာကွယ်နိုင်ရန်